ငွေအတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးရှိသောစပိန်လက်ကိုင်ဖုန်းများ Gadget သတင်း
သငျသညျစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းဟောင်းကိုအသစ်တဖန် ပြန်လည်၍ ပိုကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များဖြင့် terminal တစ်ခုကိုရယူပါအရည်အသွေးပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးဂရုတစိုက်နှင့်ခေတ်မီသောဒီဇိုင်းသည်သင်အမှတ်တံဆိပ်များစွာကိုလည်းစဉ်းစားမိသည်။ သို့သော်ဤအမှတ်တံဆိပ်အားလုံးသို့မဟုတ်အားလုံးနီးပါးသည်အခြားနိုင်ငံများမှဖြစ်ကြောင်းသတိပြုမိပါသလား။ စပိန်လက်ကိုင်ဖုန်းတွေမရှိဘူး၊ အနည်းဆုံး၊ သင်ရွေးစရာတခုလည်းထည့်နိုင်တယ်။
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာရွေးချယ်မှုတစ်ခုကိုအဆိုပြုသွားမှာပါ အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းအချိုးအစားနှင့်အတူစပိန်မိုဘိုင်း။ အချို့သောအရာများသည်အနည်းငယ်ရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်မည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်အရည်အသွေးကောင်းသည့်အစိတ်အပိုင်းများ၊ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်မှုနှင့်သင့်စိတ်ဝင်စားမှုကိုနှိုးဆွနိုင်သည့်အလွန်လက်ခံနိုင်သောစျေးနှုန်းများဖြင့်ဆိပ်ကမ်းများဖြစ်ကြောင်းသင်အတည်ပြုနိုင်လိမ့်မည်။
1 Weimei အင်အားစု ၂
2 စွမ်းအင်ဖုန်းမက်စ် 2+
3 စွမ်းအင်ဖုန်း Neo 2
4 BQ Aquaris ဦး
Weimei အင်အားစု ၂
ယင်း၏အမည်အားဖြင့်သင်ညှပ်သွားပြီဟုထင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်တရုတ်သို့မဟုတ်အရှေ့တိုင်းကုမ္ပဏီဖြစ်သော်လည်းမရှိ။ Weimei ဖြစ်ပါတယ် လတ်တလောစပိန်လက်ကိုင်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခု။ မက်ဒရစ်တွင်အခြေ ပြု၍ သူတို့၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာကမ်းလှမ်းရန်ဖြစ်သည် ကောင်းသောစျေးနှုန်းများမှာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်။ ဤအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေး - စျေးနှုန်းအချိုးအစား၏ဥပမာကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Weimei အင်အားစု ၂, သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးချောမွေ့ပြီးကွေးကောက်လိုင်းများကိုဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းဖြင့်အရောင်နှစ်မျိုး (ရွှေနှင့်အနက်ရောင်) ဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။
ဒါဟာအလွန်ကောင်းပါတယ် ၁.၂၆ လက်မမျက်နှာပြင် Resolution 1280 x 720 ရှိပြီးအတွင်း၌aARM Cortex A53 quad-core ပရိုဆက်ဆာ ဖြင့်လိုက်ပါသွား 1,45 GHz မှာ RAM ကို3GB အထိ y GB အထိသိုလှောငျ 32 ကဒ်အထိုင်ကို ကျေးဇူးတင်၍ တိုးချဲ့နိုင်သည် micro SD ပါ 256GB အထိရှိသည်။
operating system တစ်ခုအနေနှင့်၎င်းပေါ်တွင်အခြေခံထားသော WeOS interface ရှိသည် အန်းဒရွိုက် 7.0 Nougat။ ပြီးတော့ဗွီဒီယိုနဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်လာရင်၊ 13 MP အဓိကကင်မရာသည်ဓာတ်ပုံမုဒ် ၁၄ ခုပါ ၀ င်သည်ayac16 MP ရှေ့ကင်မရာ အကောင်းဆုံး selfies ရရန်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
သူ၏ရက်ရောမှုကိုကျွန်ုပ်တို့မမေ့နိုင်ပါ 4.000 mAh ဘက်ထရီ ပလပ်ဂင်မှရက်အနည်းငယ်သာကြာနိုင်သည်။ နှင့်၎င်း၏ function ကို အားပြန်သွင်းပါ ဒါကသင့်ကိုအခြား terminal တစ်ခုနှင့်ဘက်ထရီမျှဝေခွင့်ပြုသည်။
ထို့အပြင် Weimei Force2မှလည်းပံ့ပိုးမှုပေးသည် dual SIM ကဒ်ရှေ့မီး၊ လက်ဗွေဖတ်စက် နောက်ဘက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်သွယ်မှု 4G, ဘလူးတုသ် ၅.၀, GPS / A-GPS စနစ်၊ 3,5mm jack ကို plug ကို နားကြပ်နှင့်အာရုံခံကိရိယာအမြောက်အများအတွက်သင်အပြည့်အဝခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဒီ terminal နဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးပိုကောင်းပါတယ် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် ဒါပေမယ့်သင်အနည်းငယ်ယူရိုငွေကိုကယ်တင်လိုပါက, သင်လည်းရွေးချယ်နိုင်ပါသည် Weimei အင်အားစု.
အသံလွှင့်စင်များ၊ နားကြပ်များ၊ တက်ဘလက်များနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းများဖြင့်စပိန်လက်ကိုင်ဖုန်းများကိုလူသိများသော Alicante မှကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့ကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်သည်။ ငါစွမ်းအင်စနစ်နှင့်၎င်း၏ရည်ညွှန်းနေပါတယ် စွမ်းအင်ဖုန်းမက်စ် 2+, တစ် ဦး ကိုထောက်ပံ့ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့တာတဲ့စမတ်ဖုန်း "ပြီးပြည့်စုံသောမာလ်တီမီဒီယာအတွေ့အကြုံ".
ဒါဟာရှိပါတယ် ၅.၅ လက်မ IPS HD မျက်နှာပြင် (1280 x 720 pixels) သင့် multimedia ပါဝင်မှုကိုကြည့်ရှုရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် နှစ်ခု Xtreme အသံစပီကာ ၎င်းသည်ကြီးမားသောစွမ်းအားနှင့်အရည်အသွေးရှိသောအသံတို့ကိုပေးသည်။
နှင့်ရောက်ရှိသည် အန်းဒရွိုက် 6.0 Marshmallow 53 GHz ARM Cortex A1.3 quad-core ပရိုဆက်ဆာနှင့် Mali-T720MP2 GPU တို့ပါ ၀ င်သည်။2GB RAM နှင့် 16 GB သိုလှောင်မှု သင်တစ် ဦး မှတဆင့်ချဲ့ထွင်နိုင်ပြည်တွင်းရေး microSD ကဒ် အပိုဆောင်း 128GB အထိပါ။
အကယ်လို့သင်ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်တယ်၊ (သို့) ဗွီဒီယိုတွေကိုရိုက်ကူးချင်တယ်ဆိုရင်အဲဒါကိုကျေးဇူးတင်လို့ရတယ် 13 MP ဆမ်ဆောင်းအာရုံခံကိရိယာနှင့်အတူအဓိကကင်မရာ autofocus နှင့် dual ton LED flash တို့တပ်ဆင်ထားသည်။ သင် selfies ကြိုက်လျှင် ရှေ့ကင်မရာ Samsung အာရုံခံကိရိယာကိုပေါင်းစပ်ထားသည်5အမတ်.
အထက်ပါအချက်များအပြင် Energy Phone Max 2+ တွင် Dual SIM အထောက်အပံ့၊ Bluetooth 4.0, A-GPS, 4G, Wi-Fi, 3,5 mm jack connector, ၃၅၀၀ mAh ဘက်ထရီ၊ FM ရေဒီယိုနှင့်အခြားအာရုံခံကိရိယာများပါရှိသည်။
စွမ်းအင်ဖုန်း Neo 2
သုံးစွဲသူများစွာအတွက် ၅.၅ လက်မဖန်သားပြင်ပါသောဖုန်းသည်များစွာသောဖုန်းဖြစ်ပြီးအခြေခံအသုံးအများဆုံးအတွက် terminal ကိုပိုနှစ်သက်ပြီးလက်တစ်ချောင်းဖြင့်သုံးနိုင်သည်။ ၎င်းအတွက်ငွေကြေးတန်ဖိုးအရှိဆုံးစပိန်လက်ကိုင်ဖုန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် စွမ်းအင်ဖုန်း Neo 2နှင့်ဟုတ်ကဲ့, ငါတို့အမှတ်တံဆိပ်ပြန်လုပ်ပါ။
ယူရို ၇၀ ထက်မပိုသောသင့်တွင်အရည်အသွေးကောင်း။ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သောစမတ်ဖုန်းရှိသည် ၄.၅ လက်မ IPS မျက်နှာပြင် နှင့် FWVGA resolution (854 x 480 Pixels) ပါ ၀ င်သည် တစ်ခု Xtreme အသံစပီကာ နှင့် operating system တစ်ခုအဖြစ်, အန်းဒရွိုက် 6.0 Marshmallow 53GHz ARM Cortex A1.0 quad-core ပရိုဆက်ဆာသည် Mali-T720 MP1 GPU ပါ ၀ င်သည် RAM ကို 1 GB အထိ y GB အထိသိုလှောငျ 8 သင်ကဒ်နှင့်အတူချဲ့ထွင်နိုင်အတွင်းပိုင်း သော microSD 128GB အထိရှိသည် 2.000 mAh ဘက်ထရီ.
ပုံနှင့်ဗီဒီယိုအရဆိုလျှင် Energy Phone Neo2သည်a5 MP အဓိကကင်မရာ autofocus နှင့် LED flash တို့ပါဝင်သည် ရှေ့ကင်မရာ ၂ MP မဟုတ်ရင်၎င်းတွင်ဆင်တူသည့်အင်္ဂါရပ်များ (Dual SIM, Bluetooth, စသည်တို့) ပါ ၀ င်သော်လည်းဤတစ်ကြိမ်တွင်၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည် နှစ်ခုအပိုဆောင်းအိမ် မင်းကဖက်ရှင်လောကမှာအမြဲရှိတယ်။
BQ Aquaris ဦး
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာတခြားအကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်သူတွေဆီကိုရောက်လာပါတယ် စပိန်မိုဘိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုဒီကမ်းလှမ်းတဲ့ Madrid BQ BQ Aquaris ဦး ငါတို့သည်လည်းဗားရှင်းရနိုင်သည် Plus အား y Lite ကို နှစ်ဆယ်ယူရိုယူနစ်ထက်ပိုသောသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသည်။
BQ Aquaris U သည်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်သည် ၅ လက်မ IPS HD မျက်နှာပြင် (720 x 1280) နှင့် operating system ကို အန်းဒရွိုက် 7.1.1 Nougat အတွင်းပိုင်းမှာ Qualcomm ပရိုဆက်ဆာတစ်ခုပါရှိသည် Snapdragon 430 1,4 GHz octa-core နှင့် Adreno 505 GPU တို့နှင့်အတူ RAM ကို2GB အထိ, သိုလှောင်မှု 16 GBသို့မဟုတ်ကဒ်အားဖြင့်ပြည်တွင်းရေးချဲ့နိုင် သော microSD 256GB အထိရှိသည် 3080 mAh ဘက်ထရီ.
ဒါဟာရှိပါတယ် ၁၃ MP ဆမ်ဆောင်းအဓိကကင်မရာ အဆင့်ထောက်လှမ်း autofocus (PDAF) နှင့်အတူ ရှေ့ကင်မရာ 5MP Omnivision ။
အခြားအချက်များမှာ Bluetooth 4.2, GPS, Dual SIM, NFC, 4G တို့ဖြစ်သည်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » ငွေအတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးရှိသောစပိန်လက်ကိုင်ဖုန်းများ
Nook GlowLight3အသစ်သည်အီလက်ထရောနစ်မှင်မျက်နှာပြင်ပါရှိသည်
graphene နှင့် silver ရောနှောခြင်းသည်သင်၏စမတ်ဖုန်းဖန်သားပြင်ကိုမချိုးနိုင်အောင်တားဆီးပေးသည်